Olee otú Iji eche banyere Hackers ruo mgbe ebighị ebi & nd; Ntuziaka Site na ihe mgbochi
Inwe weebụsaịtị dị ka ịmepụta ụlọ ahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ. Ebe nrụọrụ weebụ bụ ebe gịndị na-ege ntị na-abata ma na-azụ ahịa ha. Ka ị na-eme ka saịtị gị na-adị ndụ, ọ dị ka ịmeghe ụlọ ahịa ịhapụ ndị mmadụ. Dị ka nkeziụlọ ahịa, ndị mmadụ kwesịrị ịbanye na ebe nrụọrụ weebụ gị mgbe ha na-abanye n'ụlọ ahịa anụ ahụ, ma eleghị anya ịzụta ihe mgbe ha chere na ị na-eme ya.
Otú ọ dị, mmadụ nwere ike ịchọ ịnweta ozi na-enweghị ikikere gị. Naanịdị ka ọrụ ọfịs, ụfọdụ ndị kwesịrị ịbịa na ebe nrụọrụ weebụ gị ma nweta nbanye ma ọ bụ ojiji nke ozi gị n'enweghị ikike - hosting telesystems network. N'ihi ya,ọnụ ụzọ nwere ọnụ ụzọ, ụlọ nwere ọnụ ụzọ ámá. A na-achọ ụdị nchebe a maka ndị na-agba ọsọ. Ndị na-agba ọsọ na-aga weebụsaịtị ma na-ezu ohidata njirimara dị ka ozi kaadị onye nwe ahịa gị. Ọ bụ ụkpụrụ iwu iji hụ na ebe nrụọrụ weebụ gị na-anọghị na nke aọgụ. N'ọtụtụ ọnọdụ, ụfọdụ mba ka na-ejide ya dị ka ọrụ iwu.
N'ime isiokwu a, Igor Gamanenko, nke Ọkachamara Gbanwee Ọrụ Ndị Ahịa, na-agwa gị otu esi echebe ebe nrụọrụ weebụ gị site na cyber ọgụ.
Ikpuchi nzuzo nke ndị ahịa
Hackers nwere ọtụtụ ihe na-ezighị ezi ebumnuche mgbe n'ịrụ ha hacks. N'ọnọdụ ụfọdụ,ha na-achọ izu ohi ma ọ bụ merie aha ụlọ ọrụ gị. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ndị na-agba ọsọ na-echegbu ma na-ahapụ foto ndị mara mma gbasara akụkọ ndị mmadụhacking..Ndepụta nke emebi emebi nke onye ọ bụla nwere ike ime enweghị njedebe. Otú ọ dị, e nwere ihe ụfọdụ, nke nwere ike ime ka ebe nrụọrụ weebụ gị. Dị nnọọ kaezi ndị ohi, ma eleghị anya ha ga-ezu ohi mgbe ị na-ahapụ ụzọ meghere. Ụfọdụ omume ị nwere ike itinye iji dozie nke a gụnyere:
Nọrọnụ ruo ụbọchị. Ọ dị oké mkpa ịnọgide na-amata usoro aghụghọ ọhụrụ, nke ndị omempụnwere ike iji n'oge ọ bụla. N'ihi ya, ị nwere ike ịkpachara anya ma tinye usoro dị mkpa n'oge, tupu ha egbuo. Ụfọdụ weebụsaịtị dị ka "The News Hacker"nwere ike inye gị ozi bara uru.
Nwee ike ịchịkwa akara. Maka ebe nrụọrụ weebụ, ozi nchịkwa kwesịrị ịdị okenzuzo. Nchịkwa nchịkwa nwere ike ịbụ ụzọ dị mfe maka onye na-eme ihe nlekota iji nweta nkọwa zuru ezu nke ebe nrụọrụ weebụ. Ọ dị mkpa iji nbanyeozi na okwuntughe, nke siri ike iche. Ọzọkwa, ị nwere ike ịkwụsị ọnụọgụ nke mgbalị nbanye ndị na-emeghị nke ọma. Nke akwesịrị ịgụnye ozi ịntanetị ebe ọ bụ na mmadụ nwere ike ibido ya ụzọ ma gbanwee okwuntughe.
Nchekwa netwọk. Ijikwa mgbidi ọkụ netwọk nwere ike inyere ụlọ ọrụ gị aka ịchekwaelu ọtụtụ na mgbalị mbanye anataghị ikike. Onye kwesiri ịtọlite ​​ma na-emelite mgbanaka mgbidi yana ijide n'aka na kọmputa dị na njikwa ọma.Dịka ọmụmaatụ, kọmputa nwere ike ịpụ apụ mgbe nkeji ole na ole nke inactivity.
Nchebe nke weebụsaịtị na ndị ọrụ ya dị ezigbo mkpa. Ndị na-eme egwuregwu nwere ọtụtụngwá ọrụ na usoro ha ji eme ihe iji nweta ebe nrụọrụ weebụ ma rụọ ụfọdụ ọrụ ha. Ụfọdụ na-emekarị ihe ndị na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe ike gụnyere mmadụnchịkọta data kaadị akwụmụgwọ sitere na weebụsaịtị ma na-ere ha n'elu ụgbụ gbara ọchịchịrị. Iji zere nsogbu ndị dị otú a, ndị nwe saịtị nwere ike iji ntuziaka ahụ na enwere nchedo na nchekwa. Ihe ndị a nwere ike ịzọpụta gị, ụlọ ọrụ gị maọbụ ọrụ gị ọtụtụ nde ego.